Raspberyy Pi - Saturngod
မနေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က Pi ကို Element 14 ကနေ ဝယ်လိုက်တာ ညနေ ၄ နာရီ ဝန်းကျင်ရောက်တော့ ရုံးကို ရောက်လာတယ်။ Shipping ကို ၁ ရက်လောက် ကြာမယ်ထင်တာ တော်တော်လေးကို မြန်တယ် ဆိုရမယ်။
– raspberry pi 512 MB Model B (S$45)
– Keyboard (S$16.77)
– Mouse (S$9.11)
– Micro USB (S$4.47)
– HDMI cable (S$2.27)
အိမ်မှာ Monitor မရှိတော့ TV နဲ့ HDMI ကို သုံးပြီး ချိတ်လို့ရပါတယ်။
Raspberry pi မှာ ပုံမှန် PC တွေလို နှစ်သက်ရာ OS သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘာ OS သွင်းမလဲ ဆိုတာကိုတော့ http://www.raspberrypi.org/downloads မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Raspbian “wheezy” က အကောင်းဆုံးပါ။ ကျွန်တော် သွင်းပြီး စမ်းကြည့်တာကတော့ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ LXDE နဲ့ ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို လေးသွားပါတယ်။ UI graphic ကတော့ Windows 98 ပုံစံလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ terminal ကိုပဲ သဘောကျတယ်။
Debian ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ubuntu သုံးတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မစိမ်းပါဘူး။ whezzy ကို သုံးပြီး ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ External Harddisk ကို NAS ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ အိမ်မှာ 1TB တစ်လုံးက ပါဝါပေးပြီး သုံးရတဲ့အတွက် သယ်ရတဲ့ မလွယ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ Web Server တစ်ခု ထောင်ထားချင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Local Network အတွက် Web Server အသေးစားလေး ကို လွယ်လင့် တကူ ထောင်ထားလို့ရပါတယ်။ SSH တို့ FTP တို့ စမ်းကြည့်ဖို့ အတွက် တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။
Media center အတွက် Raspberry pi က အဆင်ပြေပါတယ်။ XBMC ကို သုံးထားတဲ့ OS တွေ သွင်းလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော် သုံးနေတာကတော့ XBian ပါ။ raspbmc က ဘယ်လို သွင်း သွင်း မရတဲ့ အတွက်ကြောင့် အစ က စိတ်ဓာတ်တောင် ကျသွားတယ်။ ဝယ်မိတာ မှားပြီလားလို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။ XBian ကို သွင်းလိုက်တော့ boot က ချက်ချင်းတက်သွားတယ်။ UI ကလည်း smooth ဖြစ်တယ်။ MKV file တွေလည်း run တယ်။ subtitle ကတော့ မစမ်းရသေးပါဘူး။
Remote ကိုတော့ iPhone ကနေ သုံးလို့ရပါတယ်။ Air play support လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် ဆီမှာတော့ မရသေးဘူး။ ဖတ်ကြည့်တာက router issue ဖြစ်နိုင်တယ်။ သေချာ မစမ်းရသေးဘူး။ Week end မှ air play ကို စမ်းကြည့်တော့မယ်။ External Harddisk ကိုလည်း USD ထိုးလိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလို Detect သိပါတယ်။
OS သွင်းဖို့အတွက် SD card ထဲကို img file ကို သွင်းပေးရပါတယ်။ SD card ကို ဘယ်လို setup လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup မှာ ဖြစ်ကြည့်ပါ။ အသေးစိတ် ရေးထားပေးပါတယ်။ အများအားဖြင့် OS တွေက .img နဲ့ လာပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် SD card ပေါ်မှာ Windows သို့မဟုတ် Mac သို့မဟုတ် Linux OS ကို သုံးပြီးတော့ SD card ပေါ်မှာ တင်ပေးရပါတယ်။
Raspiberry pi ဝယ်သင့် သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးရင်တော့ ကိုယ်ဟာ user အနေနဲ့ သုံးမှာလား စမ်းဖို့ သုံးမှာလား လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ကလိ ချင်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြဿနာ ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝယ်ပါ။ သုံးဖို့ သက်သက် ဆိုရင်တော့ မဝယ်ပါနဲ့။ user တစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ media center လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် apple tv ဖြစ်ဖြစ် အခြား တစ်ခုခု ဝယ်လိုက်ပါ။ raspberry pi ကတော့ Linux သမားတွေ embed သမားတွေ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်လို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကလိ ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ်။
သာမာန် ကျောင်း အတွက် ဆိုရင်တော့ raspberry pi ဖိုးထက် monitor တွေ keyboard , mouse စတာတွေနဲ့ ထင်ထားတာထက် ကုန်ကျ စရိတ် များနိုင်ပါတယ်။ raspberry pi က HDMI သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် HDMI support လုပ်တဲ့ monitor ထက်လိုလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မှန်းထားတဲ့ budget ထက် ပိုများလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ဟိုစမ်း ဒီစမ်း ဆိုရင်တော့ တော်တော် မိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ embed system တွေ ရေးတတ်ရင်တော့ တော်တော် လေးကို အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ raspberry pi နဲ့ သူများတွေ စမ်းထားတာကတော့ အားကျ စရာတွေပါ။
« Simple Node.js TCP chat Server and iOS Build Media Center with Raspberry Pi »
It’s sometime over heat. And you should have extra SD Card for backup.
XBian is OK . Not over heat but CPU usages is always around 80%
Don’t worry, it will be soon. 😀 But you can buyaheat sink, it can help.
I couldn’t find heat sink for raspberry pi at element 14. Where can I buy ?